काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण मोरङ जिल्ला बुद्धिचाल संघका पूर्वअध्यक्ष तथा फिडे आर्विटर विजयकुमार थापाको सोमबार ६२ वर्षको उमेरमा विराटनगर हस्पिटलमा दुःखद निधन भएको छ । वि.सं. २०१५ साल मोरङमा जन्मिएका थापाले वि.सं. २०३८ र २०४० सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगितामा तेश्रो स्थान हात पारेका थिए । https://www.facebook.com/Mercy-Social-Action-100656455403409/ आँखामा पट्टी […]
एल क्लासिको रियल मड्रिडको कब्जमा।
२९ चैत काठमाडौं । स्पानिस ला लिगा अन्तर्गत चर्चित एल क्लासिकोमा रियल मड्रिडले बार्सिलोनालाई २-१ ले पराजित गरेको छ । यस जितपछि एट्लेटिको मड्रिड र बार्सिलोनालाई पछि पार्दै रियल अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । घरेलु मैदान अल्फ्रेडो डी स्टेफानो मैदान रियलका लागि करिम बेन्जामा र टोनी क्रुसले गोल […]
चैत २९, काठमाडौं । साविक उपविजेता दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नाई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै १४औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा विजयी सुरुवात गरेको छ । ओपनरद्वय शिखर धवन र पृथ्वी शले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक बनाएपछि दिल्लीले शनिवार चेन्नाईलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो ।चेन्नाईले दिएको १ सय ८९ रनको […]
तेस्रो टी-ट्वान्टीमा इंग्ल्यान्डको जित
एजेन्सी- भारतविरुद्धको तेस्रो टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा पाहुना टोली इंग्ल्यान्ड विजयी भएको छ । अहमदाबादमा मंगलबार राति भएको खेलमा इंग्ल्यान्डले भारतलाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो । यस जितसँगै ५ खेलको सिरिजमा इंग्ल्यान्डले २-१ को अग्रता बनाएको छ । भारतले दिएको १ सय ५७ रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले १८ ओभर २ बलमा २ […]
अस्टन एगरले ६ विकेट लिएपछि अस्ट्रेलियाको शानदार जित
फागुन १९, काठमाडौं । अस्टन एगरले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ६ विकेट लिएपछि अस्ट्रेलियाले तेस्रो टी-२० खेलमा न्युजिल्याण्डमाथि शानदार जित हात पारेको छ । बुधबार वेलिङ्गटनमा भएको खेलमा ग्लेन म्याक्सवेल र एगर चम्केपछि अस्ट्रेलियाले घरेलु टोली न्युजिल्याण्डलाई ६४ रनले पराजित गर्दै सिरिजमा पहिलो जित हात पारेको हो । म्याक्सवेलले आक्रमक ब्याटिङ […]
म्यानचेष्टर युनाइटेड र चेल्सीले अंक बाँडे
काठमाडौं । म्यानचेष्टर युनाइटेड र चेल्सीले प्रिमियर लिगमा बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । आइतबार राति चेल्सीको घरेलु मैदान स्टानफोर्ड ब्रिजमा भएको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको हो । दुवै टोलीले खेलमा गोलको अवसर पाएपनि गोल गर्न सकेनन् । बराबरीपछि युनाइटेड र चेल्सीले समान १ अंक जोडे । २६ खेलबाट ५० […]
भियारियाललाई हराउँदै एट्लेटिकोले बनायो ५ अंकको अग्रता
फागुन १७, काठमाडौं । स्पानिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहेको एट्लेटिको मड्रिडले भियारियाललाई २-० ले पराजित गरेको छ । जितपछि एट्लेटिकोले दोस्रो स्थानको बार्सिलोनामाथि ५ अंकको अग्रता बनाएको छ र एट्लेटिकोले अझै एक खेल कम खेलेको छ । भियारियालको मैदानमा भएको खेलमा एट्लेटिकोलका लागि जाओ फेलिक्सले एक गोल गरे । […]
काठमाडौं । सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा आज दुई खेल हुँदै छन् । सातदोबाटो युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लबबीचको खेल दिउँसो सवा १२ बजे सुरु हुनेछ । यस्तै मध्यपुर युथ एसोसियसनले र टुसाल क्लबबीचको खेल दिउँसो साढे ३ बजे हुनेछ । दुवै खेल एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ । हिजो भएको […]
टेष्ट क्रिकेटः भारतीय वलरसामु इंग्ल्याण्ड निरिह
फागुन १२, काठमाडौं । भारतीय स्पिनरहले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि तेस्रो टेष्टको पहिलो इनिङ्समा इंग्ल्याण्ड ११२ रनमै अलआउट भएको छ ।अहेमवादस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट स्टेडियम नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको इंग्ल्याण्डले ४८.४ ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएर ११२ रन मात्र बनाएको हो । इंग्ल्याण्डलाई अलआउट गर्न भारतीय […]
आर्सनलबिरुद्ध म्यानचेष्टर सिटीको संघर्षपूर्ण जित
१० फागुन, काठमाडौं ।प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीले आर्सनलविरुद्ध १-० को कठिन जित हात पारेको छ । आइतबार राति आर्सनलको मैदानमा भएको खेलमा रहिम स्टर्लिङले खेलको सुरुमै गरेको गोल सिटीको जितमा निर्णायक बनेको हो । आर्सनलको घरेलु मैदान एमिरेट्स स्टेडियममा भएको खेलमा स्टर्लिङले दोस्रो मिनेटमै रियाद महारेजो पासमा […]